China Ammonia emebi emebi na nrụpụta hydrogen na ụlọ ọrụ | Binuo
Ụkpụrụ nke ire Amonia
Vaporization Liquid Amonia
Mmiri mmiri amonia na-esi na karama amonia na-abanye na amonia vaporizer na mbụ. Iji kpo oku ịsa mmiri na-ekpo ọkụ na vaporization, na vaporizer bụ tube-ibé okpomọkụ mgbanwe. A na-enye Amonia n'akụkụ tube, na akụkụ shei bụ mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ site na ọkụ eletrik. Mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri mmiri amonia na-agbanwe okpomọkụ ka ọ gbanye amonia mmiri mmiri na amonia gaseous na 1.5MPa na 45 ℃. A na-ebelata amonia gas site na 1.5MPa ruo 0.05Mpa site na nrụgide na-ebelata valvụ iji gbanwee okpomọkụ na gas dị elu site na ọkụ na-ere ere, mgbe ahụ, amonia a na-ekpo ọkụ na-abanye n'ime ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
Igwe ọkụ na-emebi emebi bụ ọkụ eletrik na ihe mkpuchi ọkụ na-emebi emebi. Igwe ọkụ eletrik na-agụnye ihe ndị na-ekpo ọkụ ọkụ eletrik, ihe ndị na-emegharị emegharị, ihe mkpuchi ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ na ọkụ ọkụ eletrik ngwaọrụ. Site n'ụzọ, ihe ndị na-ekpo ọkụ eletrik nickel chromium alloy Cr20Ni80, nke bụ ihe kacha mma ọkụ ọkụ eletrik. A na-eji brik aluminom silicate fiber brik na-ewu ewu mee ihe mkpuchi ọkụ.
Igwe ọkụ na-emebi emebi bụ akụkụ bụ isi nke ire ere amonia. A na-agbawa Amonia n'ime ngwakọta hydrogen nitrogen na okpomọkụ dị elu yana ihe na-eme ka ọ dị n'ọkụ na-ere ere. Igwe ọkụ ọkụ ga-enwe ike iburu ogologo oge dị elu okpomọkụ nke 900 ℃ na corrosion sitere na amonia. Ya mere, iji elu okpomọkụ na-eguzogide alloy dị ka ọkụ liner ihe, na ọkụ liner na-eme ka n'ime U-ụdị na elu nickel catalyst. A na-emebi Amonia n'ime gas agwakọta nke nwere 75% hydrogen na 25% nitrogen nwere ihe na-akpata n'okpuru oke okpomọkụ.
Usoro kemịkalụ bụ 2NH3 → 3H2 + N2 - Q
Agwakọta gas na-agafe na igwe na-ekpo ọkụ na ihe nju oyi, wee banye na hydrogen purifier maka ịdị ọcha. Ihe nchacha ahụ mejupụtara deaerator, ngwa nju oyi, igwe na-ekpo ọkụ nke sieve, otu valvụ na njikwa eletriki.
Dị ka ụkpụrụ nke mgbali swing adsorption (PSA), e nwere abụọ molecular sieve adsorption dryers, na abụọ molecular sieve adsorption dryers na-emegharị. Otu bụ adsorbing adịghị ọcha na nke ọzọ na-desorbing na-ekpochapụ adịghị.
Usoro nbibi nke Ammonia
Amonia nke ukwuu
Nrụgide ～0.5 mmanya
Igirigi Point ≤10℃
Ọkọlọtọ N'elu nke 1st ọkọlọtọ mba klaasị
Nrụgide ~0.5 mmanya
Amonia fọdụrụnụ ≤0.1%
Ọnụego ikuku hydrogen 1~1000Nm3/h
Njirimara nke Amonia Decomposition
☆ Ọnụ ala dị ala, oriri ike na itinye ego, obere nha na arụmọrụ dị elu.
☆ A na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ site na njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka na valvụ na-achịkwa ọsọ ahụ. Ya mere, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
☆ Jiri ihe mkpali dị elu, igwe anaghị agba nchara, nickel chromium alloy electric heat element na igwe anaghị agba nchara.
☆ Dị mfe iji na wụnye na-enweghị isi owuwu, kọmpat Ọdịdị na obere ala ebe dị ka ihe integral skid ndokwasa ụdị.
☆ Enwere ike iji gas mee ihe n'efu n'ime oke mmepụta gas nwere oke nchekwa. N'ozuzu, ọ dịghị mkpa ịchekwa hydrogen na tankị nchekwa.
Nke gara aga: Methanol mebiri emebi na hydrogen
Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen osisi, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen, Ọgbọ ike hydrogen, Holtec Nitrogen Generator,